Dagaallo dad badani ku dhintay oo maalintii labaad ka socda Muqdisho. – Radio Daljir
Dagaallo dad badani ku dhintay oo maalintii labaad ka socda Muqdisho.
Maarso 11, 2010 12:00 b 0
Muqdisho, Mar 11 ? Dagaallo xooggan oo gaystay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaa maalintii labaada ka socda magaalada Muqdisho, kuwaasi oo u dhaxeeyey ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM oo dhinac ah iyo xoogagga mucaaradka ah ee dawladda ku kacsan.
Dagaalladaan oo labadii maalmood ee ay socdeen la isku adeegsanayey hubka noocyadiisa kala duwan ayaa wararka tilmaamayaan in ay ku naf-waayeen in badan 38 ruux, halka dad ka badan 110 kalana ay ku dhaawacmeen.
Dadka dhintay iyo ku dhaawacmay ayaa la tilmaamayaa in ay ku badan yihiin dad shacab ah oo madaafiic habaw ahi ku haleeshay guryahooda iyo sidoo kale goobahooda ganacsi, waxaana sidoo kale iyana dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba ku jira garabyadii dirirtu u dhaxaysay.
Goobaha lagu dagaallamaya oo ah xaafadaha C/casiis, Kaaraan iyo Shibbis, ayaa iyana la tilmaamayaa dadkii ku haray in ay iska carareen dhammaantood, iyagoo ka cabsi qaba dagaalladu in ay sii xoogaystaan khasaaruhuna uu inta ka sii bato.
Xaaladda guud ee magaalada Muqdisho ayaa dhawrkii maalmood ee ugu danbeeyey isku badashay mid colaadeed oo ka duwan sidii hore, kaddib markii ay soo baxeen hadallo ku saabsan guluf colaadeed oo wax looga badalayo xaaladda Muqdisho, taas oo ay qorshaynaysay dawladda iyo xulufadeedu.
Dagaalladii iyo madaafiicdii magaalada Muqdisho oo maalintii 3-aad galay.
Garaad C/llaahi Soofe oo ka mid ah issimada SSC oo kalsoonidii kala laabtay shirkii Buurawadal.